Ngwakọta mmiri ara ehi nwere ike igbochi colitis na-egbu egbu n'ime ụmụ ọhụrụ akabeghị aka - Ụwa 2022
Ngwakọta mmiri ara ehi nwere ike igbochi colitis na-egbu egbu n'ime ụmụ ọhụrụ akabeghị aka
Ọmụmụ ọmụmụ akaghi aka nwere ike ịbụ ọnọdụ na-eyi ndụ egwu nye nwa amụrụ ọhụrụ, mana nchọpụta ọhụrụ sitere na Mahadum Pittsburgh na-atụ anya na ọ ga-akawanye njọ maka nlanarị. Ọ na-akọ banyere mmepe nke usoro ọgwụgwọ ọhụrụ maka ọrịa na-eme ka ọ dị omimi nke na-etisa ngalaba ụmụ ọhụrụ ruo ọtụtụ iri afọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 n'ime 14 ụmụ ọhụrụ akabeghị aka na US na Canada na-etolite necrotizing entercolitis (NEC), ọrịa nke na-eme ka anụ ahụ dị n'ime afọ kpọnwụọ.
"N'ime ihe dị ka ụbọchị 10 nke ọmụmụ, nwa ahụ na-amalite ịgbọ agbọ na awa ole na ole ka e mesịrị, afọ na-agbawa agbawa ma gbanwee," ka onye edemede ukwu Dr. David Hackam, bụ prọfesọ nke ịwa ahụ na Mahadum Pittsburgh School of Medicine kwuru. "Anyị enweghị nhọrọ ọzọ ma ọ bụghị iwepụ akụkụ ahụ nwụrụ anwụ nke eriri afọ, mana n'agbanyeghị ịwa ahụ, ọkara n'ime ụmụ ọhụrụ ndị a ka na-anwụ site na ọnọdụ ahụ."
Nnyocha ndị gara aga achọpụtala na inye ụmụ ọhụrụ akabeghị aka na mmiri ara na-ebelata ohere nwatakịrị nwere maka ịmalite NEC. Otú ọ dị, n'ọtụtụ ọnọdụ, mmiri ara ara adịghị adị ngwa ngwa, ya mere usoro a na-emekarị bụ inye nri nwa ọhụrụ.
Dr. Hackam na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na akụkụ ahụ na-azọpụta ndụ nke mmiri ara ara na-ejikọta na nje bacteria na-ebi n'ime eriri afọ nwa. A na-amụ ụmụ ọhụrụ na-enweghị nje bacteria eriri afọ, ma a na-achịkwa ya ozugbo a mụsịrị ya, na mmiri ara ara maara na-akwalite usoro a.
Mgbe ụfọdụ a na-akọwa ụmụ mmadụ dị ka “planet nke ụmụ nje,” ebe ọ bụ na ọtụtụ puku nje bacteria bi n’ime anyị, ọtụtụ n’ime ha bara uru. Ha nwere ike bụrụ ihe ruru pasentị 1 ruo 3 nke oke ahụ mmadụ.
Ịnapụ ụmụ amụrụ ọhụrụ mmiri ara yiri ka ọ na-akpasu ọnọdụ dị n'etiti "ndị na-ebi nje bacteria" na eriri afọ ọhụrụ, dịka nchọpụta siri kwuo. Ọ na-akọ na mkpụrụ ndụ n'ime arịa ọbara nke eriri afọ na-emepụta ihe nnabata - Toll-like receptor 4 (TLR4) - nke dị oke mkpa maka nguzozi a. Otu Dr. Hackam chọpụtara na ụmụ ọhụrụ akabeghị aka nwere TLR4 n'ime eriri afọ ha karịa ụmụ amụrụ ọhụrụ.
Ọtụtụ TLR4 nwere ike ịkpalite mbelata na nitric oxide, kemịkalụ dị mkpa maka eruba ọbara. Nke a na-emechi emechi ọbara na-eruba na eriri afọ ma kpochie akụkụ ahụ, nke ha gosipụtara n'ụdị òké nke NEC.
Ha chọpụtara na mmiri ara ara na-abawanye na sodium nitrate, nke nje bacteria na-agbanwe n'ụzọ nkịtị ka ọ bụrụ nitric oxide, nke nwere ike ichekwa eriri eriri afọ ma melite ogo ọbara.
"Mgbe anyị nyere usoro agbakwunyere na sodium nitrate na ụmụ oke aka akabeghị aka, anyị hụrụ ka ọbara na-aga n'ihu na eriri afọ, na NEC emeghị ka ọ pụta ìhè," ka onye na-ede akwụkwọ na ọkachamara nitric oxide Dr. Mark Gladwin kwuru, onye bụkwa onye nduzi nke ụlọ ọrụ ahụ. Mahadum nke Pittsburgh's Vascular Medicine Institute.
Drs. Hackam na Gladwin na-anwale ogige ahụ, nke FDA kwadoro maka ojiji ndị ọzọ, na ụdị NEC ndị ọzọ. Ha nwere olile anya na otu ụbọchị a ga-agbakwunye ya na usoro maka ụmụ ọhụrụ akabeghị aka iji gbochie NEC.
"Ọnọdụ a na-atụ ndị nne na nna egwu ma na-akụda ndị dọkịta n'ihi na ugbu a ọ dị ntakịrị ihe anyị nwere ike ime iji gwọọ ya," Dr. Hackam kwuru. "Ana m atụ anya otu ụbọchị ịhapụ onwe m na azụmahịa na ịnweta ọgwụgwọ na-azọpụta ụmụaka ndị a n'ezie."